Ogaden News Agency (ONA) – Shacabka Itoobiya oo Farxad Darteed u Ooyey.(Qeybt 1aad)
Shacabka Itoobiya oo Farxad Darteed u Ooyey.(Qeybt 1aad)
Posted by ONA Admin	/ August 31, 2012
Maqaal aad u xiisa badan ayuu qoraaga maqaalka Maxamad Ilyas ku soo gabagabeeyay sheekadan ka xogwarameysa marxalad ay soo mareen shacabka Somaliyeed waqtigii Hantiwadaaga qasabka lagaga dhigay inay qaataan .. Wuxuuna yidhi;
Dhinaca kale, waxaan jeclaan lahaa inaan jawaab uga dhigo ragga faro ku tiriska ah ( Faroole, Shariif iyo Siilaanyo iwm), ee la sheegay inay u tacsiyadeeyeen dambiile Zenawi, maqaal uu arintan ka diyaariyey , isagoo cinwaan uga dhigay (Geerida Meles: shido Alle na dhaafiyey dheh), Mr. Abdirahman Salaad, ayaa u soo qaatay sheekadan hoose kuwa u tacsiyadeeyey dambiile Males.Wuxuuna qoray sidan;
Waqtigii dawladii kacaanku dadka shuuciyada baraysay ayaa waxaa la sheegaa in habeen kamid a habeennada, la isugu yimid mid ka mid ah xarumihii lagu magacaabi jirey Golayaasha Hanuuninta Dadweynaha.
Habeenkii oo dhan baa waxaa la wadey cayaaro iyo khudbadooyin dhaadheer oo lagu amaanayey Marx, Lenin iyo hogaamiyeyaashii kale ee shuuciyada, muddo haddii arrinkii la wadey uuna soo dhawaadey waqtigii xiritaanka kulanku ayaa nin masuuliyiinti ka mid ah intuu istaagay waxa uu ku yiri oday miskiin ah oo meesha joogay “adeer noo ducee waa gabagabadiiye”.
Odaygii si fudud buu wuxuu ku yiri EEBAHAY nimankaad caawoo dhan amaaneyseen meeshay aakhiro ka soo baxaan ha idinka soo saaro. Odagii inta lagu xanaaqay oo guul-wadeyaal lagu dalbadey baa waxaa la yiri hala xiro, waa kacaandiid dib u socad ahe. Odagii oo yaaban baa waxuu yiri; ar xay tahay nimanku niman fiican ma ahayn miyaa xaad ku diideysaan inaad aakhiro isku meel ka soo baxdaan.
Hadda waxaan leenahay nin kasta oo geeridii Meles si kal iyo laab ah uga tacsiyeeyey, ama yiri wuxuu ahaa halyey ama yiri anaguu naga dhintay Ilaahay aakhiro meeshuu ka soo baxo ha idinka soo wada saaro.
Halkan ka akhri maqaalka..